Fanamboaran-dalana eto an-dRenivohitra: mampikaika ny maro ny fitohanan’ny fifamoivoizana | NewsMada
Fanamboaran-dalana eto an-dRenivohitra: mampikaika ny maro ny fitohanan’ny fifamoivoizana
Vao maraina, nitandahatra ny fiara miala avy eo Analamahitsy ho aty Ankorondrano na Ambohimanarina. Raha amin’ny andavanandro, ora iray raha be indrindra no hamitana ny lalana Analamahitsy –Antanimena. Tao anatin’ny andro maromaro anefa, andiny efatra sy sasany vao tonga teny Antanimena ny taxi-be.
Nimenomenona daholo ny mpitaingina ka izay tsy nahandry ny fitohanana nandeha an-tongotra na nitady lalan-kafa mihitsy satria maika hamonjy asa sy fianarana. Ireo nanam-paharetana, niandry ny rariny ka tonga ihany afaka adiny efatra sy sasany aty aoriana. Ireo mbola nanohy ho any 67 ha sy Andavamamba, mbola afaka ora roa indray vao tonga any amin’izay aleha. Feno mpitandro filaminana anefa isaky ny « rond point » sy ny sampanan-dalana mandrindra ny fifamoivoizana fa tsy afa-manoatra satria tsy mihetsika mihitsy ny fitohanana.
Raha ny zavatra hita, ny fanamboaran-dalana sy ny sisin’ny arabe eran’ny tanàna no miteraka ny fitohanan’ny fifamoivoizana eto an-dRenivohitra sy ny manodidina. Tapaka ohatra ny lalana eny Ankazomanga sy Andraharo efa ho herinandro maromaro ka manova zotra ny taxi-be mampitohy iny lalana iny amin’Analakely. Tsy eny ihany fa amin’ny toerana maro ny fanamboaran-dalana ka miteraka fahasorenana ho an’ny mpampiasa lalana rehetra hatramin’ny mpandeha an-tongotra. Heverina ho vita mialoha ny Fetin’ny fiverenan’ny fahaleovantena ny fanamboarana samihafa, raha ny fizotry ny hafa no jerena, mbola haharitra herinandro maromaro izany.
Mitaraina ireo mpitatitra olona amin’ny taxi-be, zara raha mahavita “tour” roa na telo farafahabetsany dia hariva ny andro noho ny fitohanana.